San Htun's Diary: ဒီစီသွား တောလား - ၂
ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ ကြာသပတေးနေ့ ။
၇ နာရီခွဲ နှိုးစက်သံကြောင့် အိပ်ယာထကာ ခရီးစဉ်အတွက် ပြင်ဆင်ပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့် လျှောက်ရသော ဘတ်စ်ကားဂိတ်သို့ရာမားက လိုက်ပို့ သည်။ လေထန်သည်မှာ မျက်နှာတပြင်လုံး အေးစက်လာသည်မို့နားရွက်များပါ နွေးစေသော ဦးထုပ် ပြန်ယူရသည်။ ဒီစီ၏ သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးစနစ်သည် မြန်ဆန်၍ ၁၀ မိနစ်ထက် ပိုမစောင့်ရ။
ရှယ်ဒီဂရုဘူတာရုံ ရောက်ပါသလား..ရောက်တယ်..ဘယ်လောက် ကျပါသလဲ..၁ ကျပ် ၈၀..၁ ကျပ်တန် ၂ ရွက် ထည့်တော့ အမ်းဖို့အကြွေမရှိဘူး..ဘူတာရုံရောက်ရင် သတိပေးပါနော်..ဂိတ်ဆုံးပဲ..
၉ ကျပ်တန် ရထားလက်မှတ်ဝယ်တော့ ခရစ်ဒစ်ကဒ်ကို မဖတ်။ ပြောင်းပြန်များ မှားထည့်လို့ လား။ သုံးကြိမ်တိတိ ကြိုးစားပြီးသောအခါ လက်လျှော့လိုက်သည်။ နောက်စက်ပြောင်းတော့ အဆင်ပြေလေသည်။ ဒူးပွိုင့်စာကယ် ဘူတာရုံတွင် ဆင်းသည်နှင့် N2 N3 N5 ဘတ်စ်ကားဂိတ် မှတ်တိုင်တွေ့ သော်လည်း ကိုယ်သွားမည့်နေရာ ရောက်မည်လား မသေချာ၍ စက်ဘီးစီးသည့် အန်ကယ်ကြီးအား မေးသောအခါ မသိ။ တဖက်ကမ်းက ကားဂိတ်မှတ်တိုင် သွားကြည့်တော့ တရုတ်နှစ်ယောက် ကိုယ့်လို အူကြောင်ကြောင်လေးတွေ။
ဘတ်စ်ကားလာမှ ဒရိုင်ဘာကို မေးတာ အသေချာဆုံးဟုတွေးကာ အနီးမှာရှိသည့် ဆိုင်တွင် မနက်စာ စားသောက်လေသည်။ ဈေးကြီးသော်ငြား အတော်စားကောင်းလေသည်။ ဆန်းဝှစ် တဝက်ကို ဗိုက်ထဲထည့်ပြီး တဝက်ကို ကျောပိုးအိတ်ထဲ ထည့်လေသည်။ ဘတ်စ်ကားစောင့်နေတုန်း အဖြူစုံတွဲက ဒီဘတ်စ်ကားက သူတို့ သွားမည့်နေရာရောက်သလားဟု မေးလာသည်။ ကျွန်ုပ်လည်း ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ဖူးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒရိုင်ဘာကို မေးကြည့်တော့ အဝိုင်းကြီးကျော်ပြီးမှ စီးရမည်ဟု ညွှန်သည်။
မှတ်တိုင်တွင် ရပ်စောင့်ရင်း ဒီစီသားများဟု ထင်သည့်သူများကို သွားမေးတော့လည်း မသိ။ သဘောကောင်းသည့် အိန္ဒိယအန်တီကြီးကို မေးကြည့်တော့ ဒီမှတ်တိုင်ကနေ ဘုရားကျောင်း ရောက်တယ်..ဘတ်စ်ကား လာနေပြီ။ ဘယ်စီးစီး ၁ ကျပ် ၈၀။ တလမ်းလုံး သံရုံးတော်တော်များများ ရှိသည်။ ဟော ဒီမှာ ဘုရားကျောင်း... ရှေ့ မှတ်တိုင်မှာ ဆင်း။ အဘွားကြီးက ဘုရားကျောင်းက တော်တော်ကြီးတယ်။ ဘယ်က လာတာလဲဟု မေးသည်။ ကန်တက်ကီက ဆိုသောအခါ တန်နက်စီလား..တန်နက်စီ အပေါ်က ကန်တက်ကီ။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆဋ္ဌမမြောက်၊ အမေရိကန်တွင် ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သော ဝါရှင်တန်နေရှင်နယ်ကသီဒရယ်ကို ၁၈၉၃ ဇန်နဝါရီတွင် အမေရိကန်လွှတ်တော်မှ ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ၁၉၀၇ စက်တင်ဘာတွင် သမ္မတ သီရိုဒိုရုစဗဲ့မှ ဖောင်ဒေးရှင်းကျောက်တုံး ချပေးကာ စတင်ခဲ့သည်။ ၈၃ နှစ်အကြာ ၁၉၉၀ တွင် သမ္မတ ဂျော့ရ်ှဒဘလူဘုရ်ှမှ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန်များ၏ ယုံကြည်မှု၊ ဗိသုကာလက်ရာများကို ဖော်ကျူးသည်။ အထူးခြားဆုံးမှာ ပြတင်းပေါက်များ ဖြစ်သည်။ ဒီစီရောက်လျှင် မဖြစ်မနေရောက်သင့်သည့် နေရာဖြစ်သည်။
"This cathedral is never completed...for there is always something to be done here, as it isaliving placeawork in progress, and the heart of this place is found not in the magnificent soaring arches or beautiful glass but in you."
-the Rev. Peter J. Gomes
အသွားတုန်းက လမ်းညွှန်လိုက်သည့် ဒရိုင်ဘာအန်ကယ်ကြီးနှင့် ပြန်ဆုံသည်။ ဘယ်စီးစီး ၁ ကျပ် ၈၀ ဖြစ်သည်။ ဒီစီမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာနေဦးမှာလဲ..နောက်၂ရက်..စမတ်ကဒ်ဝယ်ရင် သက်သာတယ်..ရထားပဲစီးစီး၊ ကားပဲစီးစီး၊ ဘတ်စ်ကားပြောင်းရင်လည်း ထပ်ပေးစရာမလိုတော့။ ဘူတာရုံရှိသည့်ဖက်ကို လမ်းညွှန်လိုက်သေးသည်။
ဘူတာရုံလက်မှတ်ဖြတ်တော့ ဖြတ်လို့ မရ။ အသစ်ကဒ် ထပ်ဝယ်ပါ ညွှန်သည်။ တနေ့ လုံးကြိုက်သလောက်စီးလို့ ရသည့် ဝမ်းဒေးပတ်စ် ၁၄ ကျပ် ဝယ်သည်။ ကယ်ပီတယ်ကို သွားချင်လို့ဘယ်ဘူတာက အနီးဆုံးလဲ ယူနီရီစင်တာ..အမ် မြေပုံမှာတော့ ကယ်ပီတယ်ဆောက်တဲ့..I said Union Center ဟု အသံခပ်မာမာ မျက်နှာထိမျက်နှာထားဖြင့် ပြောသောအခါ အိုကေ..ကျေးဖူးတင်ပါတယ်ဆိုကာ တချိုးတည်း လစ်ရတော့သည်။ ဒီငနဲက မယုံကြည်ရဘူးထင်ကာ မတ်ထရိုဘူတာတွင် သွားမေးတော့ တနင်္ဂနွေနေ့ တုန်းက အိမ်ဖြူတော်ကို လမ်းညွှန်သည့် ဘူတာဝန်ထမ်းနှင့် ပြန်ဆုံသည်။ ယူနီယမ်စင်တာဟုပင် ညွှန်သည်။
လေတဟူးဟူး တိုက်နေသည်မို့လမ်းဘေးထိုင်ခုံတွင် ထိုင်ကာ မစားချင်။ လမ်းလျှောက်ရင်းဖြင့်ပင် ဆန်းဒစ်၊ ပန်းသီးကိုက်လေသည်။ ၁၅ မိနစ်ခန့် လျှောက်ပြီးသောအခါ ခန့် ညားလှပသော ကယ်ပီတယ်အဆောက်အဦးကို တွေ့ ရသည်။ အဆောက်အဦးပေါ်တွင် လက်နက်ကိုင်စောင့်နေသော စစ်သားများကို တွေ့ သည်။ ထိုင်စောင့်နေသည့် အန်ကယ်ကြီးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းရသည်။ ကျွှန်ုပ်ကိုသေးသေးလေး အဆောက်အဦးတခုလုံးကို အကြီးကြီး ရိုက်ပေးပါဆိုသောအခါ သဘောပေါက်သည်။ အောက်ကိုဆင်းသည့် လှေကားနားတွင် တန်းစီနေသော လူတန်းကို တွေ့ သောအခါ ကယ်ပီတယ်ထဲ ဝင်လည်ဦးမှဟု ဝင်တန်းစီလေသည်။
လုံခြုံရေး အတော်တင်းကြပ်သည်။ ရေ၊ အစားအသောက် သယ်ခွင့်မပြု။ ရေညှိထုပ်နှစ်ထုပ်၊ ရေဘူးနှစ်ဘူး ပစ်လိုက်ရလေသည်။ ခါးပတ်၊ ဖုန်း၊ ကင်မရာ အကုန်စစ်သည်။ အထဲရောက်တော့လည်း လူတန်းကြီးက အရှည်ကြီး။ ၁၅ မိနစ်၊ ၂၀ မိနစ်ခန့်တန်းစီရလေသည်။ အွန်လိုင်းတွင် မှတ်ပုံတင်လုပ်ထားလျှင်တော့ မြန်သည်။ ကယ်ပီတယ်အကြာင်း ၁၅ မိနစ် ဗီဒီယိုတွင် ကွန်ကရက် အလုပ်လုပ်ပုံ၊ ခန့် ညားလှပသော အဆောက်အဦး တည်ဆောက်ကြပုံ၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ကြပုံတို့ ကို တင်ဆက်သွားသည်။ တိုးဂိုက်မှ နားကြပ်လေးများ ပေးကာ အုပ်စုလိုက် ဦးဆောင်ပြီး ရှင်းပြသည်။ ပန်းချီ၊ ပန်းပုလက်ရာများမှာ ရှုမငြီးဖြစ်သည်။
ကယ်ပီတယ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူအများဆုံးမှတ်မိသည့် ဒီမိုကရေစီအစိုးရ၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်မှ ဥပဒေများ ရေးသားခြင်း၊ သမ္မတခန့် အပ်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုမိန့် ခွန်းများ ထုတ်ပြန်သည့်နေရာသည် ကပ်ပီတယ်ဖြစ်သည်။ ရာစုနှစ်ခုကျော်အတွင်း ပြည်ထောင်စုထဲသို့ပြည်နယ်များတိုးလာသလို ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အမတ် အရေအတွက်လည်း တိုးလာသည်။ အမိုးတွင် သမိုင်းဝင်ရုပ်ပုံများ၊ ခန်းမတွင် သမိုင်းတွင်သည့် အဖြစ်များကို ဖော်ကျူးထားသည့် ပန်းချီကားများ၊ သမိုင်းဝင်လူများ၏ ရုပ်ထုများနှင့် ဆင်ယင်ထားသည်။
ဒေါက်တာ ဝီလီယမ် တော့တွန်မှ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီး ၁၇၉၃ စက်တင်ဘာ ၁၈တွင် သမ္မတ ဂျော့ဝါရှင်တန်မှ အုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန် - ဗြိတိန် ဒုတိယစစ်ပွဲတွင် အတွင်းဖက်အားလုံးနီးပါး ပျက်စီးခဲ့ပြီး အပြင်ခွံသာ ကျန်ခဲ့သည်။ ၁၈၁၉ တွင် ဘေးတောင်ပံအဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်သည်။ ၁၈၂၆ တွင် မိန်းအဆောက်အဦးနှင့် တောင်ပံအဆောက်အဦးများ ချိတ်ဆက်ပြီး ကော့ပါးအမိုးကို ဝေါင်းတန်နာဖြင့် အနားသတ်ခဲ့သည်။ ပြည်နယ်တခုချင်းစီမှ ဂုဏ်ပြုထိုက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး၏ ရုပ်ထုများ ထည့်ဝင်ဖို့ကွန်ဂရက်မှ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ၁၈၆၃ ဒီဇင်ဘာတွင် အမေရိကန်အနုပညာရှင် သောမတ်ခရောဖို့ ဒ် ထုလုပ်သည့် လွတ်လပ်မှုရုပ်ထုကို ကယ်ပီတယ်အမိုးဝိုင်းတွင် ထားရှိသည်။
The Statue of Freedom tops the dome
ရော့တန်နာသည် ကယ်ပီတယ်၏ အလယ်ဗဟိုနှလုံးသားဖြစ်သည်။ သမ္မတ အေဘရာဟမ်လင်ကွန်း၊ ကွန်ဂရက်အမတ်၊ စစ်သူရဲကောင်းများ၊ ဂုဏ်ပြုထိုက်သည့်နိုင်ငံသားများ၏ နိုင်ငံတော်အဆင့် ဈာပန ကျင်းပရာ နေရာဖြစ်သည်။ အီတလီဖွား အမေရိကန် အနုပညာရှင် ကွန်စတန်တီနို ဘရူမီဒီသည် ကယ်ပီတယ်၏ ပန်းချီလက်ရာများ၏ ဖန်တီးရှင်ဖြစ်သည်။ ကယ်ပီတယ်ခေါင်းမိုးဝိုင်း၏ မျက်လုံးဖြစ်သော အပိုသီရိုစစ်သည် ဘရူမီဒီ ကြိုးစားအားအထုတ်ဆုံး လက်ရာဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းစစ်ပြီးဆုံး၍ အမိုးသစ်ပြီးဆုံးချိန် ၁၁လကြာ ရေးဆွဲခဲ့သည်။
ဝါရှင်တန်၏ ဘေးတဖက်တချက်တွင်ရှိသော အမျိုးသမီးနှစ်ဦးသည် လွတ်လပ်မှု၊ အာဏာ၊ အောင်မြင်မှု၊ ကျော်ကြားမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ လွင့်နေသည့်ဝတ်ရုံ ဝတ်ထားသည် မိန်းကလေးသည် မူလ ၁၃ ပြည်နယ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ E Pluribus Unum သည် လက်တင်ဘာသာဖြင့် out of many,one ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
ရိုတန်နာအား ဝန်းရံထားသော ၁၉ ခန်းပါ ပန်းချီကားသည် အနောက်ဖက်တံခါးမှ နာရီလက်တံအတိုင်း စတင်ကာ ထူးခြားသော အမေရိကန်သမိုင်းဖြစ်စဉ်များကို ဖေါ်ပြသည်။ ၁၈၅၉ တွင် ဘရူမီဒီသည် ကိုလံဘတ် အမေရိကားတိုက်ပေါ် ခြေချခြင်းမှ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ရွှေ တွေ့ ရှိခြင်း အခန်းထိ ရေးဆွဲသည်။ ၁၈၇၈ အသက် ၇၈ နှစ် ဝီလီယမ်ပန်နှင့် အင်ဒီးယမ်း အခန်းကို ရေးဆွဲနေစဉ် ခြေချော်ပြုတ်ကျသည်။ ၁၈၈၀ ဖေဖေါ်ဝါရီ မကွယ်လွန်မှီအထိ ကျန်ရှိနေသော အခန်းများကို ရေးဆွဲသွားသည်။
ဖိလစ်ပီ ကော့စကပ်ဂီနီသည် ဘရူမီဒီ မပြီးပြတ်သော လက်ရာများကို ၁၈၈၉တွင် ရေးဆွဲပြီးသွားသော်လည်း တွက်ချက်မှားမှုကြောင့် ၃၁ပေ လွတ်နေသည်။ သူ ကွယ်လွန်သည့် ၁၉၀၄ မတိုင်ခင်အထိ သူ့ ကိုယ်ပိုင်၃ခန်း ရေးဆွဲခွင့် အတည်မပြုခဲ့။ ၁၉၅၁ တွင် အဲလန်ကောက်မှ အပြီးသတ်သည်။ ရှင်းလင်းလက်စသတ်ပြီး ၁၉၅၃ တွင်မှ ပြီးစီးခဲ့သည်။
လွှတ်တော်တွင် ဆီးနိတ်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့ စည်းထားသည်။ လွှတ်တော်အမတ်များသည် ဥပဒေအဆို တင်သွင်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ၁၉၈၆ မှစတင်ကာ ဆီးနိတ်နေ့ စဉ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရုပ်မြင်သံကြားမှ ထုတ်လွှင့်သည်။ ဆီးနိတ်တွင် အဖွဲ့ ဝင် ၁၀၀ ရှိပြီး ပြည်နယ်တခုတွင် ဆီးနိတ်တာ ၂ ယောက် တူညီစွာ ကိုယ်စားပြုသည်။ ဆီးနိတ်တာသည် အသက် ၃၀ ရှိရပြီး ပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သူ အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ် ၉ နှစ် ရှိရမည်။ ဆီးနိတ်တာ၏ သက်တမ်းမှာ ၆နှစ် ဖြစ်သည်။
အိမ်လွှတ်တော်တွင် မဲပေးနိုင်သော ၄၃၅ ကိုယ်စားလှယ်ရှိသည်။ ၁၀နှစ်ကြာတိုင်း ပြည်နယ်၏ လူဦးရေပေါ် မူတည်ကာ ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက် ဆုံးဖြတ်သည်။ ပြည်နယ်တစ်ခုစီတွင် အနည်းဆုံး ကိုယ်စားလှယ်တယောက် မရှိမဖြစ် ရှိရသည်။ ကိုယ်စားလှယ် သေဆုံးခဲ့လျှင် အထူးရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အစားထိုးသည်။ သို့ သော် အမေရိကန် ဆမိုအာ၊ ဒီစီ၊ ဂွမ်၊ ဗာဂျင်းအိုင်လန်၊ မြောက်ပိုင်းမေရီယာနာပြည်နယ်မှ မဲပေးခွင့် မရှိ။ ပွာရိုတိုရီကိုအား ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်မှ ကိုယ်စားပြုသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သည် အသက် ၂၅ ရှိပြီး ဒေသတွင် နေထိုင်သူ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၇နှစ် ရှိရမည်။ ကိုယ်စားလှယ်သက်တမ်းမှာ ၂ နှစ် ဖြစ်သည်။
ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စုအာဏာကို ဆီးနိတ်နှင့် အိမ်တော် နှစ်ရပ်လုံးအား မျှဝေပေးထားသည်။ အခြေံဥပဒေအရ ဆီးနိတ်နှင့် အိမ်တော် နှစ်ရပ်လုံး စစ်ပွဲကြေငြာခြင်း၊ လက်နက်ကိုင်တပ် ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အခွန်ထိန်းညှိခြင်း၊ ချေးငွေ၊ ဒင်္ဂါးထုတ်ဝေခြင်း၊ စီးပွားရေး ညှိခြင်း၊ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းခြင်းများကို တာဝန်ယူရသည်။
ဆီးနိတ်မှသာ နိုင်ငံတကာစာချုပ်များအား အကြံညဏ်ပေးခြင်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခွင့်အာဏာရှိသည်။ အီလက်ထရိုကောလိပ်မှ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားနေလျှင် အိမ်တော်မှ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရသူကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အိမ်တော်သည် သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအမတ်များများ၏ မတရားမှုများ အဆိုတင်သွင်းနိုင်သည့် အာဏာရှိပြီး ဆီးနိတ်သည် ထိုမတရားမှုများကို သုံးသပ်ကာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်၊ ဖယ်ရှားခွင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာရှိသည်။ စစ်တပ်သည် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတွင် လုံးဝမပါဝင်ဘဲ ပြည်သူများ ရွေးခြယ်ထားသည့် သမ္မတ၊ အမတ်များဖြင့် ဖွဲ့ စည်းထားသည် လွှတ်တော်၏ အမိန့် ကို နာခံရသည်။
လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးနေသည်ကို မြင်လိုလျှင်၊ လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် တွေ့ လိုလျှင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ရပြီး ၄ နာရီထိုးလုပြီမို့အိမ်ပြန်ရန် ဘူတာရုံဆီ ချီတက်ရလေသည်။ မည်သည့်အထိမ်းအမှတ်မှန်း ကျွှန်ုပ် မသိသော်လည်း ယူနီယံစင်တာဘူတာရုံရှေ့ တွင်ရှိသော ရုပ်တုဖြစ်သည်။ ဒီစီသည် ရှေးဟောင်းလက်ရာများနှင့် ခန့် ညားသည့် မြို့တော်ဖြစ်သည်။
The United States Capitol is the most widely recognized symbol of democratic government in the world. It has housed Congress since 1800. The Capitol is where Congress meets to write the laws of this nation and where presidents are inaugurated and deliver their State of the Union messages. For more than two centuries, the Capitol has grown along with the nation, adding new wings to accommodate the increasing number of senators and representatives as new states entered the Union. Its ceilings are decorated with historic images, and it halls are lined with statues and paintings representing great events and people from the nation's history.
The original Capitol was designed by Dr. William Thornton, and the cornerstone was laid by President George Washington on September 18, 1793.
This view shows the Capitol in 1800 with only the north wing completed.
The first known photograph of the Capitol was taken in 1846
Construction of the new cast-iron dome was well under way in 1861.
The Rotunda is the heart and center of the Capitol. Although it serves no legislative function, it isaceremonial space where state funerals have been held since the time of Abraham Lincoln, for presidents, members of Congress, military heroes and eminent citizen. Hanging in the Rotunda are four giant canvases painted by four other artists depict events associated with the exploration and settlement of the United States. The Apotheosis of Washington painted by Italian-American artist Constantino Brumidi shows George Washington surrounded by symbols of American democracy and technological progress.
The United States Congress is composed of two legislative bodies, the Senate and the House of Representatives, which meet in separate chambers in the two wings of the Capitol. Here members introduce legislation; speak out on the issues, and case votes on bills, resolution, nominations, and treaties. Since 1986, the Senate's daily proceedings have been televised.
The Senate has 100 members, with each state equally represented by two senators. A senator must be thirty years of age,aresident of the state, andacitizen of the United States for at least nine years. Senators are elected for six-year, overlapping terms, with one-third of the Senate being elected every two years.
Originally senators were chosen by sate legislators, but in 1913 the Seventeenth Amendment provided for direct election of senators by the people. Ifavacancy occurs, the governor of most states may appointareplacement . The vice president is the "president of the Senate", but onadaily basis the presiding officer's chair is usually held by the president pro tempore (the senior member of the majority party) oradesignee. The vice president votes only to breakatie.
Since the early 20th century, the House's membership has been set at 435 voting representatives. Every 10 years, after the census, states are assignedanumber of representatives based on their population and may be redistricted. Each state is entitled to at least one representative.
Ifarepresentative dies or leaves office in midterm,aspecial election is held to chooseareplacement. In addition, non-voting delegates present American Samoa, the District of Columbia, Guam, the Virgin Islands, and the Northern Mariana Islands; Puerto Rico is represented byaresident commissioner.
A representative must be twenty-five years of age,aresident of the state, and the citizen of the United States for at least seven years. Members of the House of Representatives serve two-year terms. The presiding officer of the House is the Speaker. The Speaker is next in line after the vice president to succeed to the presidency.
Under the constitutional system of checks and balances, federal powers are both shared and divided among the legislative, executive, and judicial branches of government, as well as between the two houses of Congress.
The Constitution gives both the Senate and House responsibility for declaring war, maintaining the armed forces, assessing taxes, borrowing money, minting currency, regulation commerce, and making all laws necessary for the operation of the government.
The Senate alone offers advice and consent on treaties and nominations. In the event of an indecisive Electoral College vote, the House determines the winner ofapresidential election - as it did in the elections of 1800 and 1824. The House has the sole power to initiate impeachment proceeding (an indictment of the president or other federal officer), and the Senate has sole power to try an impeached officer and decides whether or not to remove the individual from office.
လက်ကမ်းစာစောင်ထဲက ကယ်ပီတယ်အကြောင်း ကျွန်ုပ်၏ ဘာသာပြန်မှုထက် မူရင်းအင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ရခြင်းက ပိုရှင်းလင်းမည် ထင်သောကြောင့် ကူးတင်ပေးလိုက်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ မဲပေးစနစ်အကြောင်းကို ရေးပါဦးဟု ဆိုလာသည့် မြန်မာပြည်က ကိုကျော်သူရ ဒီပို့ စ်လေးနှင့် ကျေနပ်မည် ထင်ပါသည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၃။
Cathedral ထဲ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ခွင့်ပေးထားပါလား။ ဒီမှာရှိတဲ့ နာမည်ကြီး St Paul's Cathedral ကိုတော့ အပြင်ဘက်ကဘဲ ရိုက်ခွင့်ရှိတယ်။ အထဲရောက်သွားရင် ရိုက်ခွင့်မပေးတော့ဘူး။ ဘာကြောင့်ရယ်မသိ။
CAPITOL ထဲ ရောက်ဖူးချင်စမ်းပါဘိ။ ကြားဖူးနေတာတော့ ကြာပြီ။ Learn to speak English လေ့လာတုန်းက ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ စတွေ့ဖူးတာ။ Capital အပြင် Capitol ဆိုတဲ့ စာလုံးလဲ ရှိသေးမှန်း အဲဒီအချိန်ကမှ စသိရတာ။း)
ဒီမနက်ပဲ အိမ်ဖြူတော်ရှေ့ Free free အော်ပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်၊၊ ကျောင်းအမှီပြန်တက်ရမှာမို့ ဘယ်မှမရောက်ခဲ့ဘူး စန်း ထွန်းရေ၊၊ မရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး အာသာဖြေလိုက်ပြီ :)
ဖို့က မလွယ်ကူလှပေမယ့် ခုတော့ စန်းထွန်းနဲ့အတူ
ကပ်ပီတို ထဲ ရောက်ဖူးသွားပြီ...၊
ဓာတ်ပုံတွေ အရမ်းကောင်းတယ် ..
ဘုရားကျောင်းထဲက လက်ရာတွေကတော့ တကယ်ကို အံ့မခန်းဘဲနော်.. အခွင့်ရှိရင် ရောက်ဖူးချင်ပါသေးတယ်
ကိုယ်မရောက်သေးလည်း စန်းထွန်းတင်ပေးတာ ဖတ်ပြီး ဗဟုသုတ ရရပါတယ်။
တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပိုစ့်တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီး တကယ်ရောက်သွားသလိုစီးမျောခံစားသွားတယ်
ဗဟုသုတလဲတိုးသွားတယ် ။ တောလားတွေကိုနောက်ပြန်ဖတ်ဖို့မှတ်သွားတယ်
ဗဟုသုတ အများကြီးရပါတယ်.... ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျား